तलब माग्दै शिक्षक आन्दोलनमा | नुवागी
तलब माग्दै शिक्षक आन्दोलनमा
काठमाडौं, २१ असार । हातमा व्यानर र प्लेकार्ड बोकेका शिक्षकहरूले ड्रम बजाउँदै शिक्षा मन्त्रालय जाने बाटोमा जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । सो जुउनीहरूले तलबमा पन्ध्र प्रतिशत वृद्धिको माग गर्दै सो जुलुस गरेका हुन् ।
आफूले पाउँदै आएको तलब गरिबीको रेखामुनिको खर्च बराबर भएको भन्दै अर्जेन्टिनाका हजारौं शिक्षकले राजधानी व्युनर्स आयर्समा प्रदर्शन गरे । ‘ शिक्षकहरूले गरिबीको तहभन्दा कम तलब पाउँदै आएका छन् । हामीले तलब वृद्धिको माग गर्नुको अर्थ हो हामीलाई पुस्तक किन्ने, थियटरमा जाने, राम्रोसँग खान सक्ने खर्चको प्रबन्ध गर भन्नु तर जब हामी यस्ता माग गर्छौं हामीमाथि सरकारले दमनको भाषा बोल्छ । त्यही कारण पनि हामी हड्तालमा उत्रेका हौं।’, शैक्षिक मजदुर सङ्घका महासचिव इडुआर्डो लोपेजले भने ।
अर्जेन्टिनाको दक्षिणी चाबुट प्रान्तमा भएको शिक्षकहरूको प्रर्दशनमाथि प्रहरीबाट भएको दमनविरुद्ध पनि शिक्षकहरुले विरोध जनाएका छन् । चाबुटमा बितेका एक सय दिनमा प्रहरी र शिक्षकबीच लगातार द्वन्द्व हुँदै आएको छ ।
अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति माउरिसिओ माक्रीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी निकै कटौती गरेका छन् । गएको बुधबारमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले औपचारिक रुपमा अर्जेन्टिनालाई मुद्रास्फीति, बजेट घाटा र कमजोर मुद्राका समस्या समाधान गर्न भन्दै ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृति गरेको छ ।
शिक्षक बन्छु भनी प्रतिवद्ध भएर आउने विद्यार्थीको अनुपात कति छ त ?
किन पढ्ने विज्ञान ?
केटाकेटीलाई खुसीका साथ हुर्काउन सुझावहरु
स्कूल–कलेजले विद्यार्थीको सुत्ने समय त चोर्दै छैन?
SQC: A gateway to Twenty First Century Learning Skills
विश्वका शिक्षकबारे अध्ययन : चीनमा सबैभन्दा बढी सम्मान